Misy fofona misy naoty Ratsy Plugin ao amin'ny WordPress | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 2, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny fandraisana anjara amin'ny hetsika open source dia mety hahagaga, saingy tsy anisan'ireo fotoana ireo ity herinandro ity. Efa am-polony taona izao izahay no nandray anjara tamin'ny fikambanana WordPress. Nanangana plugins tsy tambo isaina izahay. Ny sasany efa nisotro ronono, ary ny sasany kosa tratry ny fanjanahana. Our Widget Rotator amin'ny sary plugin, ohatra, dia efa nalefa in-120,000 mahery ary mavitrika amin'ny tranokala WordPress 10,000 XNUMX mahery.
Plugin iray izay nametrahantsika vola an-jatony nandritra ny ora dia CircuPress, ny plugin mailaka mailaka novolavolainay ho an'ny WordPress. Mahafinaritra tokoa ny plugin, mamela ny maso ivoho hanangana mailaka tahaka ny fanaovan'izy ireo pejy lohahevitra… fa ny fandefasana ny mailaka amin'ny alàlan'ny serivisinay mba hahafahanay mitantana ny fanarahan-dia ny tsindry, ny fitantanana ny bouncing, ny mpamandrika ary ny famandrihana. Betsaka ny asa fotodrafitrasa ilaina mba hanaovana an'io, saingy mandritra ny fotoana maharitra isika. Mino izahay fa ny mpampiasa WordPress dia tokony hanana sehatra email an-toerana izay mora ampiasaina.
Na dia manamboatra ny lampihazo aza izahay dia mbola tsy nitory olona na iray aza tamin'ny fampiasana azy - milay raha manontany ahy ianao. Ny fisoratana anarana dia manolotra kinova maimaim-poana raha mandefa mailaka latsaky ny 100 isam-bolana ianao, saingy nanitatra izany izahay raha mamadika ny rafitra faktiora ho WooCommerce ary miasa amin'ny fametrahana ny lampihazo mba hahamora ny mpampiasa azy.
Gaga aho fa nanana tsikera mipoitra kintana 1 tao amin'ny tranokala Plugin izahay. Avy hatrany dia nikoropaka aho hahita izay tsy nety:
Ka… tsy nisoratra anarana mihitsy ity mpampiasa ity fa nilaza fa ahiahiana amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana ataonay. Nentina niverina tampoka aho nanomboka taminay aza mangataka fampahalalana momba ny carte de crédit raha ny marina. Ho fantany fa raha nahavita ny fizotran'ny fisoratana anarana izy, saingy tsy nanao izany.
Nihevitra aho fa tsy rariny loatra io mba hitadiavana izany Automattic, manoratra ny Plugin Support person:
Ny valiny voaraiko dia nahataitra kokoa noho ny fanadihadihana ihany. Niverina niverimberina niaraka tamin'ilay olona tao amin'ny Automattic aho nilaza fa toa izany ny tranokalanay lota satria tsy nisy ny vidin'ny lisitra ampahibemaso. Shady?
Notsiahiviko izy fa izahay AZA MANGATAKA KARATRA CREDIT vaovao alohan'ny hanolorany ny vidiny amin'ilay olona. Ary na eo aza izany dia mbola tsy nampangaintsika ireo mpiandany voalohany taminay. Efa nisoratra anarana amin'ny serivisy tsy misy vidiny ve ianao? Azoko antoka fa manana ianao… WordPress mangataka fisoratana anarana nefa tsy misy fampahalalana momba ny vidiny amin'ny serivisy fanampiny. Shady?
Tsy lazaina intsony ny Ny pejy momba ny vidiny dia noresahina tao amin'ny FAQ ny plugin. Nandritra izany fotoana izany dia namoaka ny pejy pricing ao amin'ny menio azonay ka tsy nisy fikorontanana n'iza n'iza, fa mbola nangataka ny hanesorana ny famerenana. Ny valiny:
Noho izany, amin'ny teny hafa, olona nanaiky tsy nampiasa ny serivisinay mihitsy avela hanisa ny serivisinay amin'ny hevitra 1-kintana. Satria miasa izahay manampy ny vondrom-piarahamonina misokatra ary manome vahaolana mora vidy kokoa, tsy azoko antoka hoe ahoana no anampian'ny olona izany. Fijerena an-tariby fotsiny ity - miaiky tanteraka ny mpanoratra fa tsy nanao sonia na nampiasa ny serivisinay.
Nahatsapa ho hafa aho raha nanoratra sy nanome naoty anay tamin'ny fahaizan'ny plugin ny mpandinika - na dia nanampy aza izy fa naniry ny ho eo amin'ilay tranonkala ny vidiny. Saingy ny famerenana 1-kintana ho an'ny zavatra iray izay tsy nampiasainy dia tsy azafady.
Fanavaozana 11/2: Izao aho tezitra, dia Ramoramangotraka, tsy misaina, dia jerk, very saina, ary tsy mahay mandinika satria tezitra aho fa nisy olona tsy mba nampiasa plugin mihitsy nanao famerenana 1-kintana, nanalavitra ny tsy fahatokisan-tenanay, ary izay nisoratra anarana dia adala. Ny serivisy izay tsy nosoniavin'izy ireo mihitsy.
Etsy ambany ny mailako, eo ambony ny valintenin'izy ireo.
Angamba tonga ny fotoana anaovako fotsiny izay ataon'ny mpamorona plugin hafa Matt ary ny ekipa ao amin'ny WordPress dia tsy mankasitraka, ary mandingana ny fanomezana fotoana sy ezaka miverina amin'ny WordPress ary manomboka mivarotra plugins amin'ny tranokalako ihany. Miharihary fa tsy miraharaha ireo olona manohana ny sehatra misy azy ireo izy ireo.
Fanavaozana 11/3: Androany, nanapa-kevitra ny ekipa mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny WordPress fa mila fanabeazana amin'ny marketing aho ary nanoro hevitra ahy ho lehilahy tsara kokoa. Etsy ambany ny mailako, eo ambony ny valintenin'izy ireo.
Tags: mike epsteinnaoty plugin WordPressplugins wordpresshevitra momba ny isa momba ny wordpress
Ny tetikadinao B2B dia tokony hisy ecommerce
3 Novambra 2015 à 9:58
Miombon-kevitra aminao aho ary mandeha toy ny mpanolotsaina dia ny rafitra famerenana. Tsy misy politika fiantohana kalitao momba ny rafitra famerenana fa ny hevitra dia ampiasaina ho fivarotana na dia ho an'ny vokatra / serivisy tsy mandeha araka ny filazany na mandika ny politikan'ny fahazoan-dàlana. Tsy rariny izany ary tsy matihanina. Be dia be koa ny rafitra tsikera/naoty ivelany nefa azonao atao ny mandà ny naoty ambany.
Tsy mino ny naoty/famerenana aho satria tsy tantanin'ny antoko fahatelo tsy miankina izy ireo ary tsy manana taratasy fanamarinana rafitra (toy ny iso na mitovitovy).
Izaho koa tsy dia mino ny tsena toy ny envato na mitovitovy. Nametraka hira vitsivitsy aho taloha (mpiangaly mozika koa aho) ary tsy nekena mihitsy. Ankehitriny aho dia manoratra mozika ho an'ny orinasa sarimihetsika sasany.
3 Novambra 2015 à 11:56
Misy rafitra sasany tena manao asa tsara amin'ny fanelanelanana. Ny Lisitr'i Angie, ohatra, dia manome fahafahana ho an'ny mpiantoka hanatsara ny zava-drehetra ary rehefa ifanarahana ho mahafa-po dia azo ovaina ny famerenana ratsy. Mampalahelo fa mijoro ity famerenana ity - tsy manome lanja ny fiarahamonina izany ary mety handratra ny fananganan'ny plugin ihany.
4 Novambra 2015 à 10:06
Tongava amin'ny lafiny maizina ary ekeo ny herin'ny CMS ara-barotra, Doug! 🙂
5 Novambra 2015 à 3:14
Tsy ao amin'ny vondrom-piarahamonina open source ihany ny olona manelingelina.